Nkuzi 5 Amụtara Site n'ihe karịrị nde 30 Otu-na-otu Mmekọrịta ndị ahịa na 2021 | Martech Zone
Na 2015, mụ na onye na-arụkọ ọrụ m malitere ịgbanwe otú ndị na-ere ahịa si eme mmekọrịta na ndị ahịa ha. Gịnị kpatara? Mmekọrịta dị n'etiti ndị ahịa na mgbasa ozi dijitalụ agbanweela nke ọma, mana ahịa esitebeghị na ya pụta.
Ahụrụ m na enwere nnukwu nsogbu mgbaama na mkpọtụ, ma ọ gwụla ma ụdịrị dị mkpa, ha enweghị ike nweta akara ngosi ahịa ha siri ike ka a nụ ya na static. Ahụrụkwa m na ọha mmadụ gbara ọchịchịrị na-arị elu, ebe mgbasa ozi dijitalụ na ụdị na-ahụ njikọ aka ịnya ụgbọ ala na mberede, mana enweghị ike soro isi mmalite ya.
Kedu ihe mere n'elu static wee dọta uche onye ahịa? Izi ozi. Onye ọ bụla na-eziga ozi kwa ụbọchị, mana ụdị na-eleghara ọwa ahụ anya - na-emebi ha. Anyị chọrọ inyere ụdị aka ịdọrọ uche ndị na-ege ha ntị n'ụzọ ọhụrụ, yabụ anyị malitere Spectrm dị ka ụzọ isi hazie nnyefe ọdịnaya n'otu n'otu site na izi ozi na ngwa ebe ndị mmadụ na-etinye oge ha, na iji nweta ụdị na-ekwu okwu. na ndị ahịa, ọ bụghị at ha. Anyị chọpụtara ngwa ngwa na nke a bụ ọwa mgbasa ozi na-edochaghị anya nke doziri ihe ịma aka ndị a niile maka ụdị ndị ahịa n'ịntanetị.
Afọ ise ka e mesịrị, anyị amụtala ọtụtụ ihe gbasara ịzụ ahịa mkparịta ụka, na 2021 naanị, anyị nyeere ndị ahịa anyị ihe karịrị nde 30 otu onye na otu onye. Nke a bụ ihe anyị mụtara site n'inyere ndị ahịa aka ịmalite ma tụọ atụmatụ ozi nkata nke ha, yana ka iso ndị ahịa na-emekọrịta ihe ozugbo na-emepụta ahụmịhe ahaziri iche ha na-achọ.
Ihe mmụta ise amụtara maka imezi ozi akpaghị aka
Anyị mụtara ọtụtụ ihe site n'inyere ụdịdị Fortune 100 aka chepụta na ọnụ ọgụgụ ahịa chatbots nke na-abụghị nanị na-etinye ndị ahịa aka kama na-atụgharị na ahịa. Nke a bụ ụfọdụ ụzọ ị ga-esi mepụta atụmatụ izi ozi akpaaka na-aga nke ọma, yana ihe kpatara o ji dị mkpa.
Ihe ọmụmụ 1: Malite na nko
Ọ na-abụkarị ajụjụ kachasị ukwuu nke onye na-ere ahịa: Kedu ka m ga-esi dọta uche ndị na-ege m ntị, oleekwa otu m ga-esi jikọọ onwe m ma nye ihe na-eme ka ha chọọ itinye aka? Nke mbụ, mepụta nko na-adọrọ adọrọ nke na-adaba na isi ihe mgbu ị na-edozi na ihe kpatara ha ga-eji na-akpakọrịta na chatbot gị. Kedu uru ha ga-enweta site na ahụmahụ ahụ? Jikwaa atụmanya ha gbasara ihe ha ga-enweta site na ahụmịhe ahụ. Mgbe ahụ, jiri akwụkwọ nzaghachi ozugbo na-eduzi ndị ahịa gị site na mgbanwe mgbanwe iji mee ihe.
Gịnị kpatara ya? Ike agwụla ndị na-ege gị ntị maka mbọ ahịa dijitalụ ha na-ahụ kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị na ha chọrọ ihe dị iche mana ha ga-ahọrọ ụdị ndị na-enye ahụmịhe na-enyere aka na mkpa. Data anyị na-egosi na ahụmahụ ndị na-ekwupụta uru nke ahụmahụ ahụ kpọmkwem na nke na-eduzi ndị ahịa na njem na nzaghachi ndị a tụrụ aro nwere njikọ aka siri ike na ịrụ ọrụ ntụgharị.
Ihe ọmụmụ 2: Nye Chatbot gị àgwà siri ike
Ndị ahịa gị nwere ike ịma ma ha na bot teknụzụ ọjọọ na-akwado na-emekọrịta ihe ma ọ bụrụ na ajụrụ ya ajụjụ na-abụghị “edemede”. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ime ka bot gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ, mana iji tinye data mkparịta ụka gị iji mee ka ha mara ihe ma na-anabata ya. Nye bot gị ụdị agwa nke dabara na olu ika gị, mee ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, na ọbụna jiri emojis, onyonyo ma ọ bụ gifs mgbe ị na-akparịta ụka.
Gịnị kpatara ya? N'agbanyeghị na ha maara na ha na chatbot na-akpakọrịta, ndị na-azụ ahịa chọrọ ka ha na ụdị ndị ha hụrụ n'anya na-emekọrịta ihe n'ọkwa nkeonwe. Mgbe ha na ndị enyi ha na-ezi ozi, ọchị, onyonyo, .gifs na emoji bụ akụkụ nke nzikọrịta ozi ahụ. Ihe data anyị gosikwara na ụdị ndị nwere njirimara bot siri ike yana imepụta nkata nwere mmasị na njikọ aka kacha sie ike.
Ihe ọmụmụ 3: Sochie mkparịta ụka gị
Mmekọrịta ndị ahịa na-ejidekwa ọtụtụ data. Tinye ntughari ntụgharị na ịkọ akụkọ n'obi nke atụmatụ mkparịta ụka gị, mana were usoro zuru oke maka njiri mara nke na-eme ka ị na-atụle nke ọma mmetụta ọwa ahịa ọhụrụ a.
Telekom nwere ọnụego mgbanwe 9x vs mkpọsa okporo ụzọ webụsaịtị ha.
Purple nwetara nloghachi 4x na mmefu mgbasa ozi.
Site na iji ozi ahaziri ahazi, Ford nwere nkwalite ikwu 54% n'uche yana ebuli 38% n'ebumnuche nzụta - ha abụọ dị elu karịa akara ala ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Gịnị kpatara ya? Mgbanwe na ụkpụrụ nzuzo na kuki na-amachi ụzọ ndị ahịa nwere ike isi soro atụmatụ mgbasa ozi dijitalụ ha. Ịre ahịa mkparịta ụka abụghị naanị na-enye ọwa nke ị nwere ike isi na-achịkọta data ekwuputara ozugbo site n'aka ndị ahịa gị, ọ bụ ebe a na-emetụ aka nke enwere ike ịchọta iji nyere gị aka ịghọta ROI gị n'ozuzu ya. Ọzọkwa, ahụmịhe anyị na ndị ahịa bụ na ha enweela ike itinye aka na mkparịta ụka na ntụgharị saịtị iji kwalite ọwara ha.
Ihe ọmụmụ 4: Na-anọ mgbe niile
N'ihi na ndị ahịa na-anọghị na ekwentị ha n'oge awa azụmahịa gị, ozi na-akpaghị aka n'otu n'otu nwere ike ịdị adị mgbe niile iji tinye ndị ahịa aka n'oge ọ bụla n'ụbọchị ọ bụ. Inweta otu mgbe niile-na Atụmatụ ahịa mkparịta ụka na-egosi ndị na-ege gị ntị na ị dị maka ha.
Nke a bụ ndị na-azaghachi na akụkọ anyị gbasara ya Ala nke Social Mkparịta ụka Azụmahịa. Anyị chọpụtara na isi ihe abụọ mere mmadụ ga-eji na-ekwurịta okwu na ika site na ngwa izi ozi bụ n'ihi na ọ na-adaba adaba karịa n'ihi na ha na-ahọrọ mgbe ha ga-etinye aka, ọ na-adịkwa ngwa ngwa.
Ma mgbe niile na-na bụghị nanị banyere izute ndị ahịa na-atụ anya. Ọ bụ maka iche echiche gafere mkpọsa. Inwe usoro mkparịta ụka na-eme mgbe niile bụ naanị ụzọ ị ga-esi bulie uru izi ozi dị ka ọwa.
Gịnị kpatara ya? Ụdị ndị na-agbaso ụzọ obere oge, usoro lekwasịrị anya mkpọsa nwere ike ịhụ nlọghachi ụfọdụ, mana ha ga-emecha hapụ maka ụdị ndị na-eme usoro mgbe niile. Dịka ọwa mgbasa ozi ọ bụla, ekwesịrị ịkwalite ozi na-aga n'ihu dabere na data ị weghara na nkata. Ịnabata usoro a na-eme mgbe niile nke na-eme ka ozi dị n'ofe ikpo okwu na-enyere gị aka ịmepụta uru kachasị na ogologo oge. Gịnị kpatara? Ị na-ewulite ndị na-ege ntị ozugbo na ọwa izipu ozi ị nwere ike itinye ọzọ iji kwalite uru ndụ ndị ahịa. Ị na-ebulikwa AI mkparịta ụka gị dabere na data ozi ị na-enweta n'aka ndị ahịa.
Ihe ọmụmụ 5: Jiri data ekwuputara maka ntinye aka ka mma
Ekwuwapụtara data anakọtara site na mmekọrịta ndị ahịa, yana data mgbasa ozi mgbasa ozi yana nyocha weebụsaịtị, nwere ike itinye aka na mbọ ịre ahịa n'ozuzu ya. Ọ nwere ike inyere gị aka ọ bụghị naanị ka ị ghọta ndị na-ege gị ntị na mkpa ha nke ọma mana ọ nwere ike inyere gị aka kesaa ndị na-ege gị ntị nke ọma, wee hazie otu ị ga-esi tinyeghachi ha na ọwa ozi ndị ahụ.
Gịnị kpatara ya? Ihe data anyị na-egosi na ụdị ndị na-eji data ekwuputara anakọtara na mkparịta ụka na-enwekwa ike ịmepụta akụkụ ezubere iche nke ukwuu iji tinyegharịa na ọwa izi ozi, na-ebute arụmọrụ ntụgharị siri ike karị. Ịmakwa ọkwa ntinyeghachi nke ahaziri iche na ngwa dị ka Messenger get 80% oghe ọnụego na 35% site na ọnụego pịa na nkezi. Nke ahụ buru ibu ma e jiri ya tụnyere ọwa dị ka email, a na-eche na ọ bụ ọwa njide kacha mma. Ọzọkwa, 78% nke ndị ahịa na-ekwu na ha ga-enwe ike ịzụrụ ọzọ n'aka onye na-ere ahịa ma ọ bụrụ na ihe ha na-enye ezubere iche maka ọdịmma na mkpa ha.
Izi ozi bụ Ọdịnihu Ahịa
Ụzọ kacha mma maka ịzụ ahịa mkparịta ụka bụ site na izi ozi na-akpaghị aka na otu na otu na ngwa ebe ndị ahịa gị na-eji oge ha. Ọ bụ ihe ga-enye gị ohere ịbụ egwu na ndụ ndị ahịa gị, ọ bụghị naanị akụkụ nke static nke ụdị ndị ọzọ na ndabere.
Budata akụkọ mkparịta ụka gbasara mmekọrịta ọha na eze Spectrm
Tags: aiozi akpaakaomume kacha mmabotnkata bot kacha mmankata akankata nkatankataahịa mkparịta ụkamkparịta ụka ahịa atụmatụmkparịta ụkamgbanwemmekọrịta ndị ahịakwuru dataEmojiemoticonsihe mmutangwa igweoziizi ozi ngwaizi ozi ngwanzuzoPurpleakụkọụdịdị dị iche ichesteeti azụmahịa mkparịta ụka mmekọrịtatlekom